01 INSTITUTY LIVABLEAIR
--- Mifantoha amin'ny fikarohana teknolojia azo iainana an-drivotra
Sehatra fantsom-panafody / fitsapana fanatanterahana sivana / fisedrana ny membrane hafanana
Fanadihadiana momba ny tabataba / fitsapana fahasamihafana Enthalpy
02 TANJONA NY TEKNOLOGY MITONDRA
Ny orinasa dia manana injeniera R&D matihanina tafiditra amin'ny sehatry ny fanadiovana ara-nofo vaovao, famolavolana indostrialy, famolavolana bobongolo, fanaraha-maso mandeha ho azy, famakafakana fitsapana sy fitantanana tetikasa, manome ny fanohanan'ny mpiasa ny fanavaozana tsy miankina sy ny fanovana ny zava-bitan'ny siansa sy ny teknolojia. Miantehitra amin'ny ekipa R&D matanjaka sy traikefa manankarena vokatra amin'ny fampandrosoana sy ny famolavolana ny vokatra, ny famokarana vokatra sy ny fanaraha-maso kalitao an'ny orinasa dia afaka mamaly ny filan'ny mpanjifa sy ny tsena tsaratsara kokoa.
Tetikasa sarimihetsika maintso
Herin'ny harato banga
03 FAHASALAHANA ENTERPRISE
--Teknolojia tombony lehibe
Ny fikarohana ara-teknika sy ny fanavaozana mitohy dia ny fifaninanana ifotony an'ny WRN. Ny WRN dia nahazo patanty manan-kery mihoatra ny 100 amin'ny sehatry ny fitaovana vaovao, ny fitsaboana ny maintso, ny fanamasinana ny rivotra, ny rafi-panafody afovoany, ny fahaizan-tsaina sns. Ankoatr'izay dia voafidy ho toy ny Enterprise-Level Advantage Enterprise ao amin'ny IPRs, Intelligent Manufacturing ary Innovative Advanced Enterprise. Nanangana andrim-panjakana toy ny Livable Air Institute sy Surface Treatment Institute izahay. Amin'ny alàlan'ny fanavaozana ara-teknolojia sy fikarohana, dia afaka mahita ny hoavintsika mifototra amin'ny tsena isika.
Ekipa fanavaozana teknolojia orinasa
Institiota fikarohana an'ny orinasa
Ivotoerana momba ny injeniera